Kismaayo Dalxiiska Mucaaradka ! | Xaqiiqonews
Kismaayo Dalxiiska Mucaaradka !
Maalmihii ugu dambeeyey Waxaa Magaalado Kismaayo ku sii qulqalaayey Hogaamiyaal iyo Madax xilal muhiim ah ka soo qaabtay Soomaaliya, si ay halkaasi ugu qeyb galaan wax loogu yeeray Caleymo saarka Axmed Madoobe.
Inkastoo ujeedada ay Kimaayo u tageen ay ku sheegeen in ay tahay in ay halkaasi ugu qeyb-galaan Xalfadda Caleymo-saarka Hogaamiye Axmed Madoobe, haddana dadka siyaasadda falanqeeya ayaa safaradaasi ku tilmaamay “Dalxiis”.
Dadka halkaasi ku sugan waxaa ka mid ah Xasan Sheikh, Shiikh Shariif, Cabdikarin Guuled, Shariif Sakiin, Dani iyo kuwa kale oo badan.
Sidoo Kale Aqri Jeesow “Isqarxin-Siyaasadeed Ayaa Kismaayo Ka Dhacday”
Macno Walbo oo loo sameeyo safarka raggasi ay ku tageen Kimsaayo, lagama gudbi karo xaqiiqda ah in Axmed Madoobe aysan Aqoonsaneyn Df-ka iyo Beesha Caalamka, taasi oo safarkooda ka dhigeysa mid aan muhiim aheyn.